Xaaladda Qaboojiyaha Dhaqaalaha ee Baska, Tababaraha, Baska Dugsiga iyo warshadleyda Basaska Gaaban iyo SONGZ
Taxanaha SZQ, Dhaqaalaha, A / C ee 9 ilaa 12.9 m bas, socodka isku midka ah aluminium fin finer
Dhanka qaboojiyaha baska yar ama baska kayar 8.5m, fadlan tixraac taxanaha SZG. Ama waxaad nagala soo xiriiri kartaa sales@shsongz.cn wixii faahfaahin dheeraad ah.
Faahfaahinta Farsamada ee Basaska A / C SZQ:
28 kW ama 95536 Btu / h
30 kW ama 102360 Btu / h
6300 m3 / saac (3)
33 kW ama 112596 Btu / h
35 kW ama 119420 Btu / h
37 kW ama 126244 Btu / h
36 kW ama 122832 Btu / h
38 kW ama 129656 Btu / h
40 kW ama 136480 Btu / h
SZQ-Ⅲ-D Macluumaadka Farsamada SZQ-ⅢF-D Macluumaadka Farsamada SZQ-Ⅳ-D Macluumaadka Farsamada
SZQ-ⅣF-D Macluumaadka Farsamada SZQ-Ⅵ-D Macluumaadka Farsamada SZQ-ⅥF-D Macluumaadka Farsamada
Macluumaadka Farsamada SZQ-VD SZQ-VF-D Macluumaadka Farsamada
3. Shaqada kululaynta waa ikhtiyaari.
Hordhac farsamo oo faahfaahsan oo ah Qaboojiyaha Basaska Taxanaha SZQ
1. Muuqaal qurux badan
SZQ taxanaha qaboojiyaha wuxuu qaataa naqshad khafiif ah, dhumucda qaboojiyaha waa 188mm, taas oo ka hooseysa dhumucda qaboojiyaha caadiga ah ee hadda jira, kaasoo buuxiya shuruudaha baska ee xakamaynta dhererka qaboojiyaha. Intaas waxaa sii dheer, muuqaalka qaboojiyaha waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo, kaas oo la jaan qaadaya bilicsanaanta casriga ah wuxuuna leeyahay muuqaal qurux iyo moodo leh.
Iskuduwaha wuxuu adeegsadaa xudunta socodka socodka. Saldhigga hawo-mareenka waxaa loo qaabeeyey qaab qaab-dhismeedka V-ga ah oo la rogay oo aan lahayn qaab-dhismeedka qolofka hoose. Nidaamka hawada ee isku-xiraha hawada wuxuu qaataa qaab-dhismeedka foorarsiga isku-dhafan ee hoose. Iyada oo loo marayo hababka kor ku xusan, miisaanka qaboojiyaha si weyn ayaa loo dhimay.
Udub dhexaad isku mid ah iyo V-jir aan qaab dhismeedka qolofka hoose
3. Wareejinta kuleylka oo hufan
Naqshadaynta dariiqa socodka qulqulka iskuxidhka qulqulka, aagga heerkulka sare ee qaboojiyaha gudaha wuxuu u dhigmaa aagga xawaaraha dabaysha hore ee condenser-ka. Caabbinta kuleylka ee kala duwanaanta heerkulka sare iyo naqshadda macquulka ah ee dhererka geedi socodka ayaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo caabbinta socodka. taas oo kordhinaysa kuleylka hawo-mareenka iyo awoodda is-weydaarsiga si loo kordhiyo wax-ku-oolnimada isku-beddelayaasha kuleylka socodka isku midka ah.
4. Ilaalinta deegaanka
Marka loo barbardhigo hawo-dhaqameedka tuubbada-fin, dhaqanka taxanaha 'SZQ' wuxuu adeegsadaa udub-dhexaadka is-barbar socda oo la habeeyay iyo hagaajinta dhuumaha nidaamka qaboojinta hawada. Kuwani waxay gacan ka geystaan ​​yareynta lacagta qaboojiyaha 40%. Taas oo yareyneysa saameynta qulqulka qulqulka ee deegaanka.
Hore: Qaboojiyaha Baska, Tababaraha, Baska dugsiga iyo Basaska Gaaban
Xiga: Qaboojiyaha Baska ee Loo Yaqaano Double Decker Bus